Ingxoxo yevidiyo i-Vreale TV
Abasebenzisi abangaphezu kwama-500 000 namathani wokusakazwa kungxoxo yevidiyo engahleliwe
Ingxoxo igcwele imizwa emihle, ukudlala ngothando, namantombazane akhangayo. Siyayiqapha ngokuqhubekayo, futhi asivumeli noma ngubani ongaphansi kweminyaka engu-18 ngenkathi ikuvikela kokuqukethwe okuhlaselayo. Ngaphezu kwalokho, ungangeza abasebenzisi abangajabulisi kuhlu lwakho lwesimungulu nokuvinjelwa. Ngenxa yalokhu, sikhululekile ngokumema abasebenzisi abasha endaweni yethu yokuxhumana.
Uhlelo lokusebenza lwe-Chatroulette lunethuba elihlukile lokukhombisa hhayi kuphela ukusakazwa kwe-webcam, kepha futhi nokuvula nokuvala ikhamera yakho yewebhu ukuxhumana ngasese. Ukuxoxa ndawonye kuyindlela enhle yokwazana kangcono.
IVreale TV iyisikhungo sokuheha zonke izinhlobo zabantu abavela kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Abaculi, abadlali, abantu beqembu: bonke bahlanganiswe yisifiso esifanayo sokuhlangana futhi sijabule. Ngokushesha faka igumbi lokuxoxa bese ujoyina umphakathi onobungane wengxoxo yevidiyo yeVreale TV.
Izitika ezithandekayo nezithonjana. Abaculi bethu abanamakhono benza izitikha eziningi ezithandekayo nezihlekisayo ngoba kunezikhathi lapho isitikha esisodwa esifike ngesikhathi singasho lokho ngaphezu kodonga lombhalo. Abanye babasebenzisi bethu baxhumana kuphela ngokusebenzisa izitika! Ukudlala ngothando namantombazane akukaze kube lula futhi kunganaki. Kepha-ke, kubo bonke abasebenzisi bezithonjana zesikole esidala, sinokukhetha okuthandwa kakhulu.
Amakhamera wangempela abukhoma
Ungakha isitayela sakho esihlukile semifudlana yakho. Faka incazelo nezixhumanisi zokuxhumana nabantu bese unikela ngezinsizakalo. Encazelweni ungachaza imithetho yomdlalo noma yokuziphatha engxoxweni. Ungashicilela futhi amavidiyo, izithombe nama-athikili kubhulogi lakho.
Bekucatshangwa ukuthi udinga imali engasile ngokuphelele ukwenza owakho umbukiso wangempela. Kepha akunjalo, izikhathi ziyashintsha futhi manje ungakwenza mahhala ku-chatrulet. Sisebenza njalo ukuthuthukisa insizakalo, kepha nezici zamanje zanele lokho. Sikunikeza nezithameli zokuqala kanye nethuba lokuzitholela zona. Ungazuza ngamathiphu avela kubasebenzisi, ngokugcwalisa ama-oda avela kubabukeli futhi, futhi, ungazuza ngokukhangisa, ukukhombisa egumbini lokuxoxa noma ngokuthumela imibukiso engokoqobo erekhodiwe ku-YouTube.
Ukuthumela umbhalo okujwayelekile kuphelelwe yisikhathi kuleli qophelo, futhi akunakunikeza ukusondelana okuthola ngokuxoxa ngevidiyo. Uzohlangana namantombazane amasha avela kwamanye amadolobha, ngisho namanye amazwe alula kunakuqala! Hlangana, xoxa ngezindaba, futhi wabelane ngokuvelayo. Ukwenza izinto zithakazelise, ungakhohlwa ububanzi bezinketho ezitholakalayo kuwe nakumuntu oxoxa naye. Isibonelo, ungaya kudethi ebonakalayo, futhi uhlele ngisho nesidlo sasebusuku sothando ngamakhandlela. Faka umcabango wakho, i-webcam yakho, namabanga omzimba azonyamalala. Kuyamangalisa!